Ny Xiaomi Mi Band 4 dia hanana Bluetooth 5.0 sy NFC chip | Androidsis
Andro vitsy lasa izay dia nampahafantarinay anao ny momba ny drafitry ny orinasa Aziatika rehefa manomboka taranaka vaovao an'ny Xiaomi Mi Band, inona dia ny taranaka fahefatra. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy daty manokana hanombohana ity taranaka fahefatra ity ary toa tsy maika ny orinasa.
Tsy maika ianao satria araka ny milaza fa miaraka ny varotra. Ny tsaho mifandraika amin'ity taranaka vaovao ity dia tsy nisy, mandra-pahatongan'ny fotoana nanamafisana fa ny orinasa dia efa miasa ao amin'ny Mi Band 4. Araka ny fampitam-baovao TechRadar, ny taranaka fahefatra mety hanana Bluetooth 5.0 sy NFC chip.
TechRadar dia nilaza fa ny Mi Band 4 dia efa nahavita ny fanamarinana mifanaraka amin'izany. Raha ny filazan'ny rafitra tompon'andraikitra amin'ny fanamarinana ity fitaovana ity dia mikasa ny hanangana modely roa samy hafa ny orinasa, ny iray miaraka amin'ny NFC miaraka amin'ny isa XMSH08HM ary ny iray hafa tsy misy NFC manana isa XMSH07HM. Mazava ho azy, ny fitaovana roa dia hanana fifandraisana 5.0 Bluetooth.
Fa ny chip NFC Mety tsy ilay fiasa vaovao mahasarika saina indrindra io, satria azo inoana fa ny orinasa Aziatika dia afaka mampiditra electrocardiogram mitovy amin'ilay hitantsika amin'izao fotoana izao ao amin'ny Apple Watch Series 4, zavatra tsy dia azo inoana loatra satria hampiakatra ny vidin'ny fitaovana farany io.
Na, mety a fampisehoana loko dia asa iray hafa izay mety ho avy amin'ny tanan'ny zafiafy. Ny efijery loko iray dia afaka manome anao fisondrotana izay ilain'ny fehin-tanana io ho lasa mpivarotra tsara indrindra eran'izao tontolo izao, na dia mety hampiditra electrocardiogram aza izy, azo inoana fa hiakatra ny vidin'ity fitaovana ity ary tsy safidy intsony ho an'ireo mpampiasa rehetra izay te hanomboka hanisa ny fampiasan'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Xiaomi Mi Band 4 dia hanana chip Bluetooth 5.0 sy NFC
Ny Vivo NEX S dia mandray ny fanavaozana ny Android Pie miaraka amina fanatsarana sy vaovao maro
Huawei mankafy ny famaritana am-pitokisana 9e [+ Mpanolotra ofisialy]